2021 ny vola miditra amin'ny fizahan-tany latsaka ny antsasaky ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » 2021 ny vola miditra amin'ny fizahan-tany latsaka ny antsasaky ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny vola miditra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany maneran-tany dia vinavinaina hahatratra $ 385 miliara monja amin'ny 2021, latsaky ny antsasaky ny haavon'ny pre-COVID-19.
Ny areti-mandringana COVID-19 dia niteraka ny fihenan'ny tsena lehibe indrindra teo amin'ny tantara.
Fitsipika Lockdown mba hifehezana ny fihanaky ny viriosy, mitarika fialan-tsasatra an'arivony an'arivony ary hotely mihidy.
Ny totalin'ny fatiantoka fidiram-bola eo amin'ny tsenan'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia antenaina hijoro amin'ity taona ity fa goavana.
Ireo firenena manerana an'izao tontolo izao dia nanomboka niomana tamin'ny fahavaratra 2021 tamin'ny voalohan'ny taona mba hamelomana indray ny dia mankany amin'ny faritanin'izy ireo ary hahafahan'ny mpizahatany mitsidika am-pilaminana.
Ny fanidiana tanteraka tamin'ny volana voalohany tamin'ny 2021, ny fitomboan'ny fahafaha-manao fanandramana, ary na dia ny fandrarana tanteraka aza amin'ny fahatongavana tsy ilaina, indrindra ireo avy amin'ireo firenena izay misy mutation virus, dia ampahany tamin'ireo ezaka ireo. Na izany aza, mbola tsy ampy ny nampiatoana ny fiakaran'ny fatiantoka nateraky ny fiatraikany mivantana tamin'ny fizahan-tany sy ireo sehatra hafa mifandray akaiky aminy.
Araka ny angon-drakitra farany momba ny indostria, ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia vinavinaina hahatratra $ 385 miliara amin'ny 2021, latsaky ny antsasaky ny haavo alohan'ny COVID-19.
Indostrian'ny Cruise sy ny Hotely no voa mafy indrindra, ny vola miditra natambatra 258 $ lavitrisa
Ny COVID-19 dia nahatonga ny tsenan'ny tsena lehibe indrindra teo amin'ny tantara, satria ny firenena manerantany dia nametraka lalàna momba ny fanidiana mba hifehezana ny fihanaky ny viriosy, ka nahatonga fialan-tsasatra an'arivony maro ary hotely mihidy. Na dia maro tamin'izy ireo aza no nanaisotra ny fameperana fivezivezena ary nosokafana ho an'ny vanin-taona fahavaratra 2021, dia mbola goavana ny fatiantoka azo amin'ny tsena amin'ity taona ity.
Tamin'ny taona 2020, ny fidiram-bolan'ny sehatra iray manontolo dia nitotongana efa ho 60% YoY ka hatramin'ny $ 298.5 miliara, no nanambara ny angona farany. Na dia antenaina hitombo 30% ka hatramin'ny $ 385.8 miliara io tarehimarika io tamin'ny 2021, dia mbola 351 miliara dolara izany noho ny talohan'ny nitrangan'ny areti-mandringana.
The indostrian'ny fitsangantsanganana mijanona ho ny sehatra voa mafy indrindra amin'ny tsenan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Ao amin'ny 2021, ny vola miditra amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia hahatratra $ 6.6 miliara monja na 76% ambany noho ny amin'ny taona 2019. Ny indostrian'ny hotely dia manana fidiram-bola $ 132.3 miliara ary fidinana 64% ao anatin'ny roa taona. Na dia mpizahatany an-tapitrisany aza no nanapa-kevitra ny hanao fialan-tsasatra tamin'ny vanim-potoana 2021, ny statistika dia mampiseho fa ny vola azo mitambatra amin'ireo sehatra roa ireo dia hijanona $ 258 miliara ambanin'ny ambaratongam-piraisana mialoha.